Manampy An’ireo Mifindra Toerana ny Vavolombelon’i Jehovah any Ukraine
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Tsonga Xhosa Zoloa Éwé
LVIV, any Ukraine—Mbola mitohy ny fanampian’ny Vavolombelon’i Jehovah an’ireo mpiara-mivavaka aminy. An’arivony mantsy no tsy maintsy nifindra toerana noho ny ady any amin’ny faritra atsinanan’i Ukraine.
Dimanjato sy fito arivo eo ho eo izao ny Vavolombelona efa niala an’ilay faritra misy ady. Efa ho ny 4 000 amin’izy ireo no karakarain’ny komitin’ny vonjy rano vaky miisa fito, ary ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Lviv no mandamina an’ireo komity ireo. Ny ambiny kosa mipetraka any amin’ny havany na any amin’ny mpiara-mivavaka aminy any Ukraine sy any Rosia. Mbola misy Vavolombelon’i Jehovah 17 500 mahery mipetraka any amin’ilay faritra misy ady, ka komitin’ny vonjy rano vaky miisa enina no mikarakara azy ireo.
Ravan’ny baomba ny tranon’ny Vavolombelona maro, toa an’ity tany Semenivka, any amin’ny faritr’i Donetsk, ity.
Nilaza ny biraon’ny sampana any Lviv fa enina izao no Vavolombelona namoy ny ainy, hatramin’ny nanombohan’ny ady. Maty tamin’ny 17 Jona 2014 ny iray tamin’izy ireo, rehefa nisy baomba nipoaka teo akaikin’ny fiara nisy azy. Baomba koa no nahafaty an’ireo Vavolombelona dimy hafa tany Donetsk, Sloviansk, Rozkishne, ary Luhansk.
Anisan’ny fanampiana ataon’ny biraon’ny sampana any Lviv koa ny mikarakara ny fanamboarana an’ireo trano sy toeram-pivavahana an’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Vavolombelon’i Jehovah manamboatra tafo amin’ny trano simba, any Sloviansk.